Shina: Sainam-pirenena nampiady · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Novambra 2007 15:27 GMT
Nampiseho tampoka ny sainan’ny Repoblikan’I Shina (tsy Repoblika Entim-bahoaka an’i Shina izany) i Liu You-chen, mpilalao E-spaoro Taywaney teo ampandraisana ny medaily varahin’ny Lalaon’ny Aterineto manerantany [World Cyber Games (WCG) 2007] notontosaina tany Seattle USA nandritra ny fotoam-panolorana medaily. Nampirongatra ireo mpilalao tahaka an’i Sha Junchun (aka PJ) sy Li Xiaofeng (antsoina ihany koa hoe SKY) sy ny mpampahalala vaovao avy any Shina izany fihetsika izany. Nilaza moa ny avy any Taiwan (United Daily News) fa nanompa sy nihazona ny vozon’akanjon’ny [na nanandrina] mpilalao avy any Taiwan ny roa tamin’ny mpilalao mandrapahatongan’ny polisy sy ny mpikarakara nanasaraka azy ireo haingana.
Nanazava ny nampitroatra azy tao amin’ny bolongana azy manokana ao amin’ny star sports tamin’ny lalao famaranan’ny WCG i Li Xiaofeng, iray amin’ny mpilalao malaza indrindra avy amin’ny Tanibe:
Nahita ny fanafitohinana momba ny saina novakiana tao amin’ny WCG i WE.SKY (Bolongandranamana) : Eo ho eo ihany ny marina.
Vavahadin-tserasera Shinoa ECP nampidirina tamin’ny 2007-10-12 10:28:00
Hitako fa betsaka ny olona miresaka izay zava-nitranga tamin’ny lanonam-panomezan-doka tao amin’ny WCG. Efa tony saina tsara aho no miresaka izao fa tena tsy tantiko ny nahita izay nitranga tamin’iny fotoana iny. Amin’ny mahashinoa (tsara) taiza hatramin’ny voalohany dia nihevitra aho fa miara-dalana aminay ny mpiray tanindrazana avy any Taiwan [tamin’ity lalao ity].
Mazava loatra fa araka ny nitomboako no nahafantarako zavatra bebe kokoa hatrany. Raha niresaka izany [fiarahana izany?] ny tamin’ny namana aho dia nisy ny ravoravo nefa nisy nihevitra kosa fa tsy misy fomba hafa azo atao rahateo. Na izany aza dia izay no zavamisy Shinoa ary tsy hiova mandrakizay ny fisainantsika.
Tamin’io fotoana io dia nilazalaza ny fandehan’ny raharaha tany amin’ny vaomieran’ny WCG izahay. Avy eo dia ny teny nandranitra nataon’ny kapitenin’I Taiwan no nitarika korontana.
Mazava loatra fa tsy hampiova ny fijerinay mikasika ireo namana any Taiwan ny zavamisy tahaka ireny. Na izany aza, amin’ny fotoana sasany dia manana adidy isika handray andraikitra noho ny mahashinoa.
Raha ny momba ny tsikera mivaivay indray moa dia fomba fijerina fampahalalam-baovao indray ny amin’iny. Avelao izy hiteny izay tiany tenenina satria manan-jo hiteny avokoa ny rehetra.
Ny rariny hatrany no tsy maintsy hanjaka.
Eo ihany dia tsara ny milaza fa nitatitra ilay zavatra kely tsy misy dikany nataon’ny vaomieran’ny WCG Taiwan tany amin’ny vaomieran’ny WCG ny vaomieran’ny WCG Shinoa.
WAR3 namana avy any Taiwan, manantena fifankahazoana eo amintsika roa tonta aho manomboka izao! (tsy hoe vao iray no roa andro izahay no nifandray tamin’ny namana WAR3 avy any Taiwan. Mino aho fa efa mifankahalala tsara ny andaniny sy ny ankilany ka tsy izay olona iray na roa no hanimba ny fihavanana)
P.S. (Tsy mpanao gazety aho fa mino kosa aho fa misy olona afaka mitantara ny zava-nitranga any ho any. Tena zava-dehibe amiko amin’ny mahashinoa ahy ny liana sy manaraka izay ezaky ny mpilalaontsika rehefa milalao any ivelany izy ireo)
Na dia nandanjalana tsara ny bolonganteniny aza I Li Xiaofeng dia maro ireo avy amin’ny Tanibe nanohana mavitrika izay nataon’i Sha Junchun sy Li Xiaofeng nandritra ny lalao ary mihevitra fa fandraisana andraikitra sy fanehoam-pitiavantanindrazana ny nataon’izy ireo.
Indreto misy hevitra roa tao amin’ny bolongan’i Li:
Naiditry Ygod tamin’ny 2007-10-14 16:56:29
Ny rariny hatrany no hanjaka.
Zava-dehibe ny fitiavan-tanindrazana hahaolombanona.
Naiditry Kyo.Chen tamin’ny: 2007-10-12 13:15:55
Tohano ny fihetsika nataon’ny mpilalao Shinoa!!!
Tsy hanjaka na oviana na oviana ny hevitry ny vitsy dia vitsy an’isa!!
Nahita ny vokatra aho. Nanameloka ny ekipan’i Taiwan ny vaomieran’ny lalao an’aterineto manerantany(WCG), ary efa niala tsiny i Taiwan!!
Ho soroka miaramilanja sy hanao tongotra miaramamindra mandrakizay ny vahoaka Shinoa!
Misaotra anao ry Sky!
Toy izany koa ry Fly sy PJ.
Ianareo no reharehan’i Shina!!
Hanohana anareo hatrany!!
Fa misy olonineto tao amin’ny bolongana tao amin’ny varavarambe Sohu mbola nasiaka kokoa tamin’i Taiwan:
Naiditry ny Olonineto Sohu
manohana tanteraka (ny fihetsiky ny ekipa Shinoa). Manohitra tanteraka (ny ekipan’i Taywan)!
Fa inona moa ny Taiwaney? Zanaka lahy sy vavin’ny Tanibe avokoa ianareo; koanahoanamoa ianareo no mangana sainam-pirenena (hafa)? Inona no tianareo holazaina?
Handray anjara amin’ny ady avokoa ny avy any an-tsekolinay raha hanafika an’i Taiwan
Nisy Olonineto antsoina hoe Feng Guangsile (midika hoe tena malaza) nilaza ny heviny tao amin’ny fampitam-baovao hita tao amin’ny club.china.com:
Nampiditra: Feng Guangsile tamin’ny :2007-10-09 12:52:04
Nisy tokoa io. Mety hisy mihitsy ny sary nampiseho ny fifandirana.
Tena mazava tsara ny nasehon’ny saripika fa misy tanora Shinoa maromaro tsara fiakanjo ao.
Mety hoe nisy fihoaram-pefy tao. Hitanareo fa mora miakatra ihany ny tanora, indrindra moa fa Li Xiaofeng izay vao resy indrindra sy toa tsy tao mihitsy [mazava ary ve izany resaka izany?].
Tsy mino kosa aho fa nisy fikasiha-tanana tao. Raha jerena ny sary dia mahita isika fa betsaka ihany ny olona nanatrika tao; ho sahiny ve ny handà ny zavatra nataony ampahibemaso?
Na izany aza dia tsy azoko mihitsy raha Shinoa no miantso ny hafa ho “Kisoa Shinoa”. Tsy manompa tena ihany ve isika? Tsy tokony hisy mihitsy ny tahaka izany. Mieritreritra hao fa nisy olona nitrena mafy ireo teny ireo; saingy tsy hitan’ny mpampahalala vaovao izay niteny azy. Dia ny Shinoa avy hatrany no ampangaina ho nanompa. Mba tsy rariny kosa izany.
Na dia misy aza ny fahalalahan’ny gazety, tsy midika izany fa milaza ny marina hatrany izy ireo.
Misy ihany na dia izany aza ireo vitsy ao amin’ny tanibe izay manohitra ny fihetsika tsy voahevitra nataon’ireo mpilalao Shinoa tamin’ny Taiwaney.
Misy ihany koa ny Olonineto izay maneho hevitra hafa kosa ao amin’ny bolongana Sina :
[Tsy nitonona anarana] Olonineto Sina
Tsy tohanako ny fihetsiky SKY sy i PJ izay tsy misy fanajana. Tsy ianao na izaho na izy no manapakevitra ny mahafirenena an’i Taiwan na tsia. Tsy anjaran’ny mpilalao na mpakafy E-sport ny maneho izany. Anjaran’ny mpanao politika ny misahana ny politika, fa tsy anjaran’ny mpilalao E-sport izay mpitondra ny fanevan’ny fandriamapahalemana sy ny firahalahiana kosa.
jereo ny hevitra eo ambony izay lazana fa soratan’ny tanora tia tanindrazana. Hitako ihany ny antony mahatonga ny Taiwaney handala ny fahaleovantenany. Indrisy! Tena manantena tokoa aho fa hojeren’ny aty amin’ny tanibe ho tahaka ny ao anatin’i Shina I Taiwan. Saingy ny mifanohitra tanteraka amin’izany aloha no hita eto. Tsy hiverina ho anisantsika mandrakizay i Taiwan raha mbola tohizantsika ihany izao fihetsitsika izao.